Ukulungiswa kwe-Edge Edge Vulcanizing Press yeRubber Conveyor Belt Ukulungisa umzi mveliso kunye nabenzi | UAntai
Ukulungiswa kwe-Edge Vulcanizing Press yoLungiso lweeRubber zokuhambisa iBelt
Ukulungiswa kwe-Edge Vulcanizing Press yeRubber Conveyor Belt, umatshini wokulungisa ibhanti yokuhambisa irabha, isetyenziselwa ukulungisa iindawo ezincinci zebhanti yokuhambisa, umonakalo wokugqobhoza, ngakumbi ulungele indawo yokulila kunye nomonakalo kwicala lendlela ende, ukulungiswa kokuqala, ibhanti eliphakathi ukulungiswa, njalo njalo sesinye esona sixhobo sisisombululo kunye nesisombululo sokulungiswa kwe-vulcanization eshushu, umncedisi olungileyo wokulungisa inxenye yeebhanti zokuhambisa. It’ezisetyenziselwa ngokulula ukulungisa amabhanti okuhambisa kwindawo. It’Ukugcina ixesha, ukusebenza ngokukuko kunye nokusebenziseka lula.
Umzekelo XL-1000 * 270
Cofa ubude I-1000mm
Ukufudumeza Ubungakanani beplaten 1000mmx270mmx28mm
Ukufudumeza Platen Bias Angel Isidanga se90
Gross WSibhozo Wkunjalo Package 110kgs
Distance ukusuka kumda 250mm
Ulawulo Binkomo I-Voltage NjengoMthengi 's Imfuneko
Umatshini wokulungisa ibhanti usetyenziswa kakhulu, kwaye ungasetyenziswa kumalungu ethutho e-glued yokuhambisa izinto kwisinyithi, ishishini leekhemikhali, imigodi yesinyithi, izityalo zamandla, amazibuko, amazibuko, njl.
Sebenzisar Indlela yokufaka isicelo：
Fakela iglu kwimimandla eyonakeleyo efuna ukulungiswa;
） 2, Beka isitya esisezantsi, ipleyiti yoxinzelelo kunye neplate yokufudumeza esezantsi phantsi kweendawo ezonakeleyo zebhanti ngokomzobo wesakhiwo.
） 3, Beka ipleyiti yokufudumeza ephezulu kunye nebhodi yokugquma kwimimandla eyonakeleyo yebhanti. Ukulungelelanisa iipleyiti eziphezulu nezisezantsi.
） 4, Faka iqokobhe lokutshixa ngokulinganayo uze uqinise iibholiti.
5, Qhagamshela intambo ephambili kumthombo wamandla kunye nebhokisi yolawulo lombane. Kwaye emva koko uqhagamshele intambo yesibini kunye nebhokisi yolawulo kunye neepleyiti eziphezulu nezisezantsi.
） 6, Qhagamshela isiphelo esinye sombhobho woxinzelelo oluphezulu kunye nokungena kwepleyiti yoxinzelelo. Kwaye uqhagamshele elinye icala lombhobho woxinzelelo oluphezulu kunye nokuphuma kwempompo yamanzi. Cima, yonyusa uxinzelelo ngomatshini osetyenziswayo.
Izixhobo zingenziwa ngokwezi ndidi zimbini: uxinzelelo lweoyile kunye noxinzelelo lwamanzi.
Egqithileyo Ukulungiswa kweNdawo yoLungiso yoLungiso lweeVenkile zeBelt
Okulandelayo: Isanti ebandayo yesamente yerabha yokuhambisa ibhanti yokuncamathela kokuncamathela
Cinezela iBelt Vulcanization Press
Icandelo lokushicilela leBelt Vulcanization Press
Indwangu ye-Belt Vulcanization Press
Irabha yokuhambisa iBelt Vulcanization Press